Madaxweyne Xasan Sheekh oo cambaareeyey qaraxyadi Hotel Jazeera
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya Prof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay qaraxyadii ay maanta ciidamada dowladdu fashiliyeen ee ay maleeshiyaadka Shabaab ku qaadeen hoteelkii uu degganaa, isago sheegay inaysan saameyn ku yeelan doonin ficillada noocaan ah howsha qaran ee ay masuuliyiinta dowladdu u hayaan shacabka.
Isagoo ku sugan madaxtooyada qaranka, ayuu madaxweynuhu ugu tacsiyeeyay shacabka
Soomaaliyeed askartii ku geeriyootay qaraxaasi ayagoo wajibaadkooda gudanaya. Wuxuuna ku tilmaamay qaraxyada fal fashilmay hase yeeshee lagu doonayay in shacabka lagu niyad jabiyo.
Madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku sheegay in weerarka ay Shabaab soo qaadeen uusan waxba
ka beddeli doonin is bedelka iyo dowladnimada uu dalku gaaray.
“ Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u xaqiijiyo, wixii maanta dhacay wax ay ka beddelayaan nimaadka cusub, isbedelka cusub iyo dowladnimada cusub ma jiraan, Wixii wanaag ahaa ee horay loo soo qabtay ayaana halkeeda ka sii wadeynaa” .